မွေးနေ့ပြောယူကရိနျးဘာသာစကားအဖြစ်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ယူကရိနျး Quote တွင်; W dnem narOdzhennyaquot; (ထိုနေ့၏ Ukr Narodzhennya ။ ) ဒါပေမယ့်သင်ကမူရင်းဖြစ်နှင့် Quote ပြောချင်နိုင်ပါတယ်လျှင်, W narodynamyquot; (Ukr ။ Narodinami) ကယခုအများကြီးလျော့နည်းဘုံဖြစ်တယ်, ဒါတခါကဆိုသည်။
သင်သည်သင်၏ထားသောစာပိုဒ်တိုများယူကရိန်းအတွက်ရုရှား (! မွေးဖွားအတူ DNM) နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုလျှင်, လိမ့်မည်: Quote; Z ကိုနေ့လည်ခင်း narodzhennya quote; ။ ထို့အပြင်ယူကရိန်း quote; equot; ဒါဟာဖတ်ပါနှင့်ရုရှား Quote အဖြစ်အသံထွက်လိမ့်မည် equot; ။ ဆိုလိုသည်မှာယင်းကူးယူလိမ့်မည် / W ကို dnem narodzhennya / ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြင်သင်တစ်ဦးထားသောစာပိုဒ်တိုများပထမဦးဆုံး Quote add နိုင်ပါတယ်; အတူတကွ / Vita-ကူးယူ / Sun ကနှင့်ကြလိမ့်မည် pozdravlyayuquot: Quote; တစ်ရက် narodzhennya Quote ၏ Vtayu; ။ ဒါကဘယ်မှာလိုတစ်ခုခုပါပဲ။
Я — русский, более того, живу от Украины на расстоянии в несколько тысяч километров. Но вот quot;пошукалquot; в сети и нашел перевод этой фразы, то есть, quot;С днем рожденияquot; с русского на украинсикий язык. Звучит это так: quot;З днем народження!quot;.
ကလေးမွေးဖွား Vashogo သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ WCO !!!!!
သငျသညျ narodzhennya Vashogo ထိုနေ့၏ WCO !!!!!
ယူကရိနျးဘာသာစကားမှာ DNM ၏မွေးဖွားဂုဏ်ပြုရန်, ငါဆိုသည်ကားရမယ်: နေ့ကို narodzhennya ၏!
ဤကဲ့သို့သောကျနော်တို့ရုရှားအက္ခရာများအတွက်ရေးလိုက်လျှင်, အသံ, ဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများ: s ကို dnem narodzhennya ။
Слово поздравляю переводится как вiтаю, а желаю — бажаю.
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,293 စက္ကန့်ကျော် Generate ။